Wakiilka xuquuqda carruurta - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Helena Andersson/Sveriges Radio
Wakiilka xuquuqda carruurta
Publicerat fredag 8 mars 2013 kl 12.38
Fredrik Malmberg oo ah Wakiilka xuquuqda carruurta wuxuu qabaa in ay habboon tahay in boliiska laga mamnuuco in ay galaan dugsiyada si ay gacanta ugu soo dhigaan carruurta waalidka dalka ku jooga sharcidarrada.
In kastoo xilliga kuleylaha xaq loo siin doono carruurta waalidka Iswiidhen dhuumaaleysiga ku jooga ay bilaabaan dugsiyada, haddana wuxuu wakiilka xuquuqda carruurtu rumeysan yahay in carruur badani ay ka cabsan doonaan in ay tagaan dugsiyada. Sababtuna waxay tahay in aysan jirin wax iska hortaagaaya boliiska in ay galaan dugsiyada oo soo qabtaan carruurta la masaafurin doono.
Fredrik Malmberg wuxuu yiri: Arrintani waa mid welwel igu abuurtay. Sida aan ku soo aragnay dalal kale oo ka tirsan Midowga Yurub oo aysan mamnuuc ka ahayn ay ka dhici karto in mar qura la galo dugsiyada. Laakiin hal mar saamayn weyn ayey leedahay, maadaama ay cabsi awgeed waalidka ku kallifeyso in aysan carruurta u dirin dugsiyada.